Isifaki asifaki? P3Dv3
umbuzo Isifaki asifaki? P3Dv3
iinyanga 5 4 kwiiveki ezidlulileyo #1326 by Rhodaf
Ibhaliswe nje kwaye ilandwe ifayile ye-Boeing 737-800 kwaye yahamba kwinkqubo yokufaka kodwa akukho ndawo kwi "Sim Objects / Airplanes" ibonisa nayiphi na iBoing. Yintoni endiyenzayo?
iinyanga 5 3 kwiiveki ezidlulileyo #1327 by rikoooo
Ngaba unganginika ikhonkco kule dilesi, nceda, sininzi i-737 ebanjwe eRiooooo.
iinyanga 5 3 kwiiveki ezidlulileyo #1330 by Rhodaf
Jet2.com Boeing 737-800 Jet2.com Iphakheji .... NdineP3D v3 kwaye ndagijima i-installer ngamalungelo olawulo, ndaya kulayisha imoto kwaye akukho nto, ngoko ke ndihlolisise i-SimObjects Airplanes kwaye akukho nto !!
iinyanga 5 3 kwiiveki ezidlulileyo #1331 by rikoooo
Ewe, ndicinga ukuba awukhethi 'ukhethe i-P3Dv3 njenge simulator ngexesha lokufakela.
Kumele ukhethe I-3D v3 elungiselelwe ukwenzela ukuba utshele i-auto-installer apho ukukopisha iifayile.
Zama kwakhona uze undihlaziye.
iinyanga 5 3 kwiiveki ezidlulileyo #1332 by Rhodaf
Unobulumko kangaka ... kwaye u-Im ke uyimfama! Ndasebenzisa indlela yokuzenzekelayo kwaye yenza i-FSX kwimidlalo yeMicrosoft. Ngaloo xesha ndithatha i-manual ehamba kwi-browse kwaye ndithatha indawo yam ye-P3Dv3 kunye ne-bingo !! Ndiyabulela ngomonde wakho kunye noncedo. Yonke into ephambili ye2019!
iinyanga 5 kwiveki 1 eyadlulayo #1342 by rikoooo
Enkosi ngempendulo yakho. Ngokuqhelekileyo umfakisi-fowuni uzifumanisa indawo yakho yangoku ye-P3Dv3, ngexesha elizayo xa ungenayo ukukhetha ukufakela ngokwezifiso, khetha nje ukufakela ngokuzenzekelayo uze ukhangele ibhokisi ye-Prepar3D v3 ukusuka kuluhlu lwabalingisi.
Indiza ebonwabileyo kwaye unomdla onyaka omtsha
Ixesha ukwenza page: 0.313 imizuzwana